(SAWIRRO) Jaamacadda caluumka ganacsiga iyo Teknooljiyada oo laga dhagax dhigay Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Jaamacadda caluumka ganacsiga iyo Teknooljiyada oo laga dhagax dhigay Garowe.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Eng, Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey, wasiirka waxbarashada, Abshir Yuusf Ciise, iyo xubno katirsan golayaasha dowladda ayaa ka qeyb galay xaflad lagu daahfurayay jaamacadda caluumka ganacsiga iyo Teknoolooijiyada ee Royal, taasoo shalay laga dhagax dhigay Garowe.
Jaamacaddaan oo horey loo oran jiray mac-hadka Royal, ayaa ah firkad kasoo maaxday aqoonyahano Soomaaliyeed oo ku dhiiraday inay aas aasaan machad waxbarasho sare ah oo bixiya koorsooyinka ganacsiga iyo Teknooloojiyada casriga ah.
Gulled Barre Salah Barre oo kamid ah aas aasayaasha jaamacaddan ayaa sheegay Jaamacaddaan inay tahay jaamacaddii ugu horeysay Puntland ee la timaada inay dadka barto caluum gaar ah oo ka caawinaya qofka kasoo baxa inuu islamarkiiba heli karo shaqooyin badan oo dalka yaala ama inuu isagu shaqo isagu abuuran karo.
Gulled waxaa kale oo uu sheegay inay jaamacadaan yeelandoonto dhisme ku haboon caluumta ay bixinayso oo aad loo qalabayndoono, waxaa sidoo kale uu sheegay inay barnaamijkaan wadashaqayn kala leeyihiin IIHT oo ah machad Hindia fadhigiisu yahay oo xagga caluumta Teknooljiyaa kala shaqeynaya jaamacadda Royal.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa bogaadiyay aas aasida jaamacadaan, isagoo sheegay in baahi weyn loo qabay caluumtaan ay jaamacaddu dhigasyo, waxaa madaxweyne ku xigeenku sheegay inuu caalamku maanta ku tartamayo xaga Teknooljiyada, loona baahan yahay in Puntland laga aas aaso jaamacad cilmigaas dadku ka bartaaan.
Wasiirka waxbarashada Puntland. Abshir Yuusuf Ciise, ayaa soo dhoweeyay jaamacaddaan cusub, isagoo sheegay inay noqonayso jaaamacaddii 14-aad ee laga aas aaso Puntland, Waxaa kale oo wasirku sheegay inay wasaaradda waxbarashada la shaqeynayso jaamacaddaan iyo cid walba oo doonaysa inay bulshada aqoon kusoo kordhiso.
Jaamacaddaan ayaa heerarka waxbarasho ee ay bixindoonto waxay kala yihiin bachelor Degree iyo Master degree. Sidoo kale, waxay bixindoonta koorsooyin gaagaaban oo ku saabsan, maamulka, xisaabaadka, maaliyadda iyo Teknooljiyada.